HTC Wildfire X သည် Mediatek Helio P22 | နှင့်အတူပေါက်ကြားခဲ့သည် Androidsis
HTC Wildfire X ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါ်လာသည်။ Helio P22 သည်ဤမိုဘိုင်း၏အင်ဂျင်ဖြစ်သည်
HTC အရှုံးမပေးပါ; စမတ်ဖုန်းစျေးကွက်တွင်ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစွန့်ခွာမည်ဟုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားပြီး၊ ၎င်း၏မိုဘိုင်းအစိတ်အပိုင်းအတွက်ထိုင်ဝမ်ထုတ်လုပ်သူကမှတ်တမ်းတင်ထားသောဆုံးရှုံးမှု။ ၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက၏အရိပ်ပင်မဟုတ်တော့ဘဲတည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
မော်ဒယ်လ်ငါးခုသည်မကြာမီစမတ်ဖုန်းများပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မည်။ ကုမ္မဏီသည်မူကွဲများစွာမရှိသော၎င်း၏ရှေးဟောင်းတောမီးလောင်မှုဆိပ်ကမ်းများကိုပြန်လည်အသက်သွင်းရန်စီစဉ်နေသည် မကြာသေးမီအချိန်အထိဖုန်းအသစ် (၄) လုံးသာဒီအကွာအဝေးမှမျှော်လင့်ထားကြသည်။ သို့သော်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပဉ္စမဖြစ်သောဖုန်းအသစ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ တောမီး.
ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသည့် Wildfire စီးရီးတွင်ပဉ္စမဖုန်းသည် HTC Wildfire X ဖြစ်သည်ကျနော်တို့ပြောခဲ့သကဲ့သို့။ ဤဖုန်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်အခြားယခင်ကသိထားသောအခြားမော်ဒယ်များနှင့်မကိုက်ညီပါ တောမီး, တောမီး E1, E နှင့် E Plus.
စီးရီးရှိအခြားဖုန်းများနည်းတူ HTC Wildfire X သည်လည်းဘတ်ဂျက်အပိုင်းကိုပါပစ်မှတ်ထားလိမ့်မည်။ သို့သော် device ၏ rendering သည်၎င်းသည် notched display မရှိပါဟုဖော်ပြသည်။ အတွင်းပိုင်း ဖုန်းတွင် MediaTek Helio P22 SoC (MT6762)4GB RAM ပါ ၀ င်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် 19:9မျက်နှာပြင်ကို HD + resolution ဖြင့် 1,520 x 720 pixel ဖြင့်ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ထောင့်ဖြတ်မျက်နှာပြင်ကိုမသိရှိရသေးဘဲ run လိမ့်မည်။ အန်းဒရွိုက်9Pie ထည်၏။
ဖြန့်ချိမည့်ရက်နှင့်ရောင်းချမည့်ဈေးနှုန်းကဲ့သို့သောအခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမူထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးပါ။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသတင်းအချက်အလက်များကိုထောက်ခံမှုအဖြစ်သာထားရှိသည်၊ ၎င်းကိုထိုင်ဝမ်ထုတ်လုပ်သူမှအတည်ပြုရန်လိုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည် အကယ်၍ ၎င်းသည်နောက်ပိုင်းတွင်မတူညီသောအစီရင်ခံစာဖြင့်ချေပနိုင်သည့်ယိုစိမ့်မှုအဖြစ်သာကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » NOTICIAS » HTC Wildfire X ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါ်လာသည်။ Helio P22 သည်ဤမိုဘိုင်း၏အင်ဂျင်ဖြစ်သည်
WhatsApp သည်ဖုန်းမရှိဘဲအလုပ်လုပ်နိုင်သည့် desktop app တစ်ခုကိုဖွင့်လိမ့်မည်
Nokia9PureView သည်အကျော်ကြားဆုံးခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုကိုခံလိုက်ရသည်